အကောင်းဆုံး spark plug ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း | 1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ
Spark plugs များသည်သင်၏အင်ဂျင်ကိုစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်စေသည့်လေ / လောင်စာအရောအနှောကိုလောင်ကျွမ်းစေသောလေ, လောင်စာအရောအနှောကိုလောင်ကျွမ်းစေသောမီးပွားများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤသေးငယ်သော်လည်းရိုးရှင်းသော plug များသည်မထိသည့် ဦး ဆောင်သည့် ဦး ဆောင်သည့် ဦး ဆောင်လမ်းပြနှစ်ခုကို ဖြတ်. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတစ်ခုဖန်တီးသည်။
သငျသညျ don don လျှင်ဘာဖြစ်မည်ကို't ကိုမီးပွားပလပ်အစားထိုး? မီးပွားပလပ်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှယိုယွင်းပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုအစားထိုးခြင်းမရှိပါကအင်ဂျင်ကိစ္စများပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ မီးပွားပလပ်များသည်လုံလောက်စွာမမြင်နိုင်ပါကလေ / လောင်စာအရောအနှောများလောင်ကျွမ်းခြင်းသည်အင်ဂျင်နှင့်အဆိုးဆုံးဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်အဆိုးဆုံးမြင်ကွင်းတွင်မပြည့်စုံပါ။